Eriri optic isi echiche ule - Yuyao Jera Line Dabara Adaba Co., Ltd.
Eriri optic isi echiche ule na-aga n'ihu site Optical Time Domain Reflectometer (OTDR). Kedu nke bụ ngwa eji arụ ọrụ iji gosipụta mmejọ na njikọ eriri anya nke netwọkụ nkwukọrịta. OTDR na-eweputa ihe akuku n'ime eriri iji nwalee mmejọ ma ọ bụ nkwarụ. Ihe omume dị iche iche n'ime eriri ahụ na-emepụta ikposa azụ Rayleigh. Pulses na-laghachiri OTDR na ike ha na-ahụ tụrụ na gbakọọ dị ka ọrụ nke oge na-akpa nkata dị ka ọrụ nke eriri gbatia. Ike na akara ngosi weghachitere banyere ọnọdụ na ike nke ihe kpatara ya. Ọ bụghị naanị mmezi, kamakwa ngwa anya echichi ọrụ tinye n'ọrụ OTDRs.
OTDR bara uru maka ịnwale iguzosi ike n'ezi ihe nke eriri fiber optic. Ọ nwere ike ịchọpụta ọnwụ ọnwụ, tụọ ogologo ma chọpụta mmejọ. OTDR na-ejikarị emepụta "foto" nke eriri fiber optic mgbe arụnyere ọhụrụ. Ka oge na-aga, enwere ike iji atụnyere nke mbụ ahụ na akara nke abụọ ewere ma ọ bụrụ na nsogbu bilitere. Zingtụle egwu OTDR na-adịkarị mfe site na ịnwe akwụkwọ sitere na akara mbụ nke emepụtara mgbe etinyere eriri. OTDR na-egosi gị ebe eriri ndị ahụ kwụsịrị ma kwado ogo nke eriri, njikọ na splices. A na-ejikwa akara OTDR maka nchọpụta nsogbu, ebe ọ bụ na ha nwere ike igosi ebe nkwụsị dị na eriri mgbe ejiri tụnyere akwụkwọ ntinye.
Jera na-aga n'ihu nyocha nke eriri FTTH na ntụgharị (1310,1550 na 1625 nm). Anyị na-eji OTDR YOKOGAWA AQ 1200 na nke a mma ule. Inyocha ogo nke eriri anyị iji hụ na ndị ahịa anyị nwere ike ịnweta ngwaahịa ndị ga-egbo mkpa chọrọ.
Anyị na-eme ule a na eriri ọ bụla anyị mepụtara.